FSX / FSX: SE Technical Iingxaki
umbuzo FSX / FSX: SE Technical Iingxaki
iminyaka 2 iinyanga 4 ezidlulileyo #75 by Gh0stRider203
Ngaba FSX / FSX: SE ukuba buhlungu? Into nje zingahambi kakuhle? Le ndawo ukubuza kude neengxaki zakho technical! Makube bugs, moya, moya virtual, konke ...
Umsebenzisi (s) zilandelayo wathi Enkosi: sruble
iminyaka 2 iinyanga 4 ezidlulileyo #101 by varaciro
apho uhlobo imiba na ngaphandle kweziphazamiso?
iminyaka 2 iinyanga 4 ezidlulileyo #113 by Rolando
xa i uqala fsx, i kufuneka klick kude imiyalezo: impazamo initialisation ka Concorde yaseBritani, yaye iimpazamo 2 sceneries. i njani ukusombulula ezi ngxaki 3?
iminyaka 2 iinyanga 4 ezidlulileyo #115 by Gh0stRider203
Vita wabhala: xa i uqala fsx, i kufuneka klick kude imiyalezo: impazamo initialisation ka Concorde yaseBritani, yaye iimpazamo 2 sceneries. i njani ukusombulula ezi ngxaki 3?
Andiqinisekanga kakhulu ukufumana ukuba yintoni umyalezo isiphoso sakho, kodwa phantse iyalila une iikopi ezininzi ze-moya efakiweyo. Ukususa 1 yabo yayiza ukusombulula loo.
iminyaka 2 iinyanga 4 ezidlulileyo #118 by Rolando
Enkosi impendulo yakho. Mna Ndiqinisekile, ukuba benze njani. Mna ulayisha Conncords kwakhona, kodwa lokulayisha akazange ukususa ngokuchanekileyo uguqulelo efakiweyo phambi kokufaka entsha. Le ngxaki iyafana. Okanye ucinga ukuba kufuneka deinstall i Isivumelanisi ngokupheleleyo uze ulayishe kuzo?
iminyaka 2 iinyanga 4 ezidlulileyo #119 by Gh0stRider203
Vita wabhala: Enkosi impendulo yakho. Mna Ndiqinisekile, ukuba benze njani. Mna ulayisha Conncords kwakhona, kodwa lokulayisha akazange ukususa ngokuchanekileyo uguqulelo efakiweyo phambi kokufaka entsha. Le ngxaki iyafana. Okanye ucinga ukuba kufuneka deinstall i Isivumelanisi ngokupheleleyo uze ulayishe kuzo?
Bendiya Andiyifaki le Concorde (s) ngokupheleleyo, ukulayisha FSX ubone ukuba unika ukuba umyalezo, yaye UKUBA ayiwenzi, emva koko makayifake ubone ukuba kwenzeka ntoni.
iminyaka 2 iinyanga 4 ezidlulileyo #120 by Rolando
Enkosi imibono yakho. I yenza oku kulandelayo:
- khipha concordes ngokupheleleyo (bona ayibonakali kwi fsx), kodwa isigidimi efanayo!
- i azama kwakhona ikhompyutha, kodwa umyalezo efanayo
- i ilandiwe concordes ezintsha efakiweyo kubo, umyalezo efanayo
Strange, akukho? I funi ndiyazi nendlela ukucima loo myalezo engalunganga.
iminyaka 2 iinyanga 4 ezidlulileyo #122 by Gh0stRider203
Ngaba ungenile kulawulo Aircraft ukuqinisekisa ukuba bemkile?
(Kowam umzekelo, ukuba B: \_ Program Files (x86) \_ Microsoft Imidlalo \_ Microsoft Flight mshini X \_ SimObjects \_ Iinqwelomoya)
Ngaphandle koko andazi ukuba kukuxelela.
nga uthumela sekhusi se impazamo? ukuba undincede kancinane.
BTW .. baqonde nomonde wakho kulo. Ndiyazi ukuba mhlawumbi ukuba kanye njengokuba ndaxakwa (UKUBA hayi ngaphezulu ke) kunam. Akukho I hate ngaphezu izinto ayisebenzi.
iminyaka 2 iinyanga 4 ezidlulileyo #133 by Rolando
umyalezo in German (mna Swiss), oko kanye kuthetha: impazamo Inishiyala of British concorde. kodwa akukho yingxaki enkulu kuba iinqwelomoya ukubaleka ngokugqibeleleyo. i kuphela ngonqakrazo ngakumbi xa i uqala fsx ...
kunjalo, enkosi kakhulu uncedo lwakho. ukuba uya kuba nesisombululo kamva, nceda uqhagamshelane nam.
vita, a Swiss ohlala thailand ...
iminyaka 2 iinyanga 4 ezidlulileyo #134 by Gh0stRider203
Yeyiphi Concorde na? na omnye onalo kwi apha?
ngokuba oko ukuba isiJamani, oko akuyi kuba yingxaki lol ndifumene umhlobo othetha ngokutyibilikayo German ^ _ ^
Ixesha ukwenza page: 0.289 imizuzwana